क्लासिक 'फलफूल मिसिनहरु' को मित्रहरु लाई हेर्छन्: हास्य पुस्तकहरु को शैली मा यिनी चुस्त फलहरु को सिर्फ सही संयोजन मा रीलों मा जमीन हुनु पर्छ र तपाईं एक अमीर फसल कटौती गर्नेछन्! हाम्रो स्लॉट बीसौंमा™ एक वास्तविक क्लासिक हो: स्वादिष्ट फलले तपाईलाई धेरै समयमा5रिल्स र 20 जीत लाइनहरू मा ट्विस्ट पाउनेछ!
चलो जानुहोस्! तपाईंको फल जीत तपाईंको प्रतीक्षा गर्दैछ!
तपाईंको लक्ष्य एक सक्रिय जीत रेखा संग5मिल्दो प्रतीकहरु लाई मिल्दछ। तपाईंको जीत रेखाहरू बाँया देखि दाँया तिर रेल सम्म दौडिन्छन्। विजेता संयोजनमा धेरै मिल्ने प्रतीकहरू छन् (पेन्टेबल हेर्नुहोस्)। तपाईंको विजेता संयोजनहरू बायाँ र दौडमा पहिलो रील बिना बराबरी बिना दाँयामा बाँयामा सुरु गर्न। कुनै पनि स्थितिमा स्क्याटर प्रतीकहरू (तारा) जित्छन्।7स्टार को बाहेक सबै प्रतीकहरू प्रतिस्थापन गर्दछ।
फल 'एन' सेवन
वाइल्ड जन्मदिन विस्फोट
बीसौं वर्षमा अपडेट गरिएको: जनवरी 24, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 बीसौं वर्षमा
2.0.0.1 बन्द स्क्रिन
2.0.0.2 फल 'एन' सेवन
2.0.0.3 तीन संगीतकारहरू
2.0.0.4 मिस्रका नायकहरू
2.0.0.6 थाई मन्दिर
2.0.0.7 गोल्डेन टिकट
2.0.0.8 वाइल्ड जन्मदिन विस्फोट